Konke lokhu ngizokunikeza: icebo eligcwele izimfihlakalo, ukujeziswa nokuhaha | Izincwadi Zamanje
Konke lokhu ngizokunika khona
UJuan Ortiz | | Abalobi, Amabhuku, Inoveli emnyama
Konke lokhu ngizokunika khona yincwadi yesihlanu yombhali waseBasque uDolores Redondo, yashicilelwa ngo-2016. Yincwadi yamacala obugebengu esethwe eGalician Ribeira Sacra, icebo lalo eligcwele izimfihlakalo, ukujeziswa nokuhaha. Ngalo msebenzi i-literata iwine i-65th Edition yoMklomelo wePlaneta, ngemuva kokwethula umbhalo wesandla onegama ILanga laseThebes, nangaphansi kwegama lomgunyathi uJim Hawkins.
Ngaphezu komklomelo obalulekile oshiwo, uRedondo waba ngumbhali wokuqala waseSpain ukuthola iBancarella Award (2018), yenguqulo yesiNtaliyane yale ncwadi. Ngemuva konyaka, isiza samanje Business Ngaphakathi ukhethe inoveli njengokubonisa isifundazwe saseLugo, esihlokweni esinesihloko esithi: "Uhambo lwezincwadi oludabula iSpain losuku lwezincwadi", olubhalwe ngu-Ana Zarzalejos.
1 Isifinyezo sakho konke lokhu engizokunika khona (2016)
2 Ukuhlaziywa kwakho konke lokhu ngizokunika (2016)
2.2 Izindikimba ezahlukahlukene
2.3 Izindawo zomhlaba zeGalician Ribeira Sacra
2.4.1 U-Elvaro Muñiz de Dávila
2.4.2 UManuel Ortigosa
2.4.3 ULucas Robledo
2.4.4 U-Andres Nogueira
3 Mayelana nomlobi
3.1 Ubusha kanye nezifundo zobungcweti
3.2 Umsebenzi wokuba ngumpheki
3.3 Umjaho wezincwadi
3.3.1 Amanoveli kaDolores Redondo
Isifinyezo se- Konke lokhu ngizokunika khona (2016)
Konke lokhu ngizokunika...
Ngolunye usuku ekuseni, UManuel ubhale ukuphela kwencwadi yakhe yokugcina: ILanga laseThebes; ngokuzumayo ngqongqoza emnyango wakho, kuthi uma ivulwa ihlangane onogada ababili abafake inyufomu. Amanxusa ambuza ngokushesha ukuthi uyisihlobo sika-vlvaro Muñiz de Dávila, futhi ngemuva kokuqinisekisa ukuthi ungumyeni wakhe, bayamazisa ngalesi sehlakalo esibuhlungu: U-Álvaro ube nengozi yomgwaqo eGalicia lapho ngeshwa ashonele khona.
Kuthinteke kakhulu futhi ngasikhathi sinye wathakazelisa, UManuel uya eRibeira Sacra. Ukufika, kuqinisekisa ukufa kothando lokuphila kwakhe, Futhi phezu kokukhathazeka kwakhe ngokwenzekile, icala belivele livaliwe. Ngenkathi elapho, uzoqala ukuthola imininingwane ngempilo yomyeni wakhe ongasekho, enye yazo ukuthi ungowomndeni wasebukhosini baseGalician, ohlala esifundazweni lapho kwenzeka khona lezi zigameko.
Wenqatshwe abasekhweni lakhe futhi wagxila odabukweni, UManuel usezobuya lapho ezobanjwa nguNogueira, unogada womhlalaphansi osethathe umhlalaphansi. Lokhu kuvusa izinsolo zakhe maqondana naleli cala, okuvusa kuye ukungabaza okusha ngokufa komlingani wakhe kanye nomndeni wakhe ongaqondakali. Ukusola nokuzwela kwalowo owayeyisikhulu, kanye nelukuluku lokwazi nokuthukuthela kukaManuel, kuzoholela ekutheni babuze ngengozi “okuthiwa”.
Uphenyo luzohambisana nompristi uLucas, obephethe umngcwabo futhi ebengumngani kamufi esemncane. Kancane kancane, imininingwane emisha futhi emangazayo ngo-Álvaro — owayephila impilo ekabili - izovela., okungaholela ekufeni. Laba bobathathu bazodala isiphithiphithi esikhulu emndenini ohloniphekile, abazozama ukubavimba ekufinyeleleni eqinisweni; kodwa imizamo yakho iyoba yize.
Ukuhlaziywa Konke lokhu ngizokunika khona (2016)
Kuyinto inoveli yobugebengu isigaba saso sokuqala iMadrid, kodwa bese idlulela eChantada, esifundazweni saseLugo eGalicia. Incwadi inokuthile okungaphezulu koku- I-600 páginas, ihlukaniswe Izahluko eziyi-47 futhi utshelwe kumuntu wesithathu umbalisi owazi konke. Isakhiwo kuyinto ihleleke kahle kakhulu futhi kwembulwa kudriphu, okugcina izingqinamba kusukela ekuqaleni, kuze kube sekupheleni okumangazayo.
Lokhu kulandisa kukhuluma ngezinkinga eziningi, kufaka phakathi nophenyo lwengozi, olwenziwa kakhulu ngumlingiswa oyinhloko nabalingani bakhe ababili. Ngenxa yalokho, izimfihlo eziningi, amanga nezenzo ezingekho emthethweni zomndeni ohloniphekile zizovezwa futhi uhlonishwe ngabantu. Kubonisa namasiko amaningi aseGalician namasiko, womphakathi nawenkolo.
Izindawo zomhlaba zeGalician Ribeira Sacra
Kule noveli, umbhali wakhetha iGalicia njengesizinda sokuthuthuka kwabalingiswa. Le ndaba yethulwe pazo de los marquises de Santo Tomé, indawo eqanjiwe kodwa efana kakhulu nezindawo zesifundazwe saseLugo. Insimu ethile inobutha futhi iyabanda ngenxa yesimo sezulu sayo, kepha ngamathafa amahle futhi amahle, achazwa nguRedondo ngokuningiliziwe encwadini.
U-Elvaro Muñiz de Dávila
Ungusomabhizinisi, oshone ekuqaleni kwesakhiwo; uzoba yi-eksisi esemqoka endabeni. Okokuqala, ngenxa yokufa kwakhe okuyimfihlakalo; futhi okwesibili, ngempilo yakhe eyimfihlo. Njengoba inoveli iqhubeka, izihlobo zakhe - eziyingxenye yezicukuthwane zaseGalician - nezizathu ezamphoqa ukuthi aphile izimpilo ezimbili ezihlukene ngasikhathi sinye zizokwaziwa.
Ungumbhali, owaduma kakhulu ngenxa yenoveli yakhe yokuqala futhi ushade no-Álvaro. UManuel uzodlula ezigabeni eziningana, kusukela ekuphikeni ukuthukuthela ngemuva kokuthola izimfihlo zomyeni wakhe. Iqiniso lakho lizoshintsha ngokuphelele ngenxa yokufa kwakhe; nomndeni omusha, ifa elikhulu kanye nezinselelo eziningi ezandisa indawo enobutha.
Ungubaba ongumKatolika futhi ungumngane omkhulu ka-Álvaro, ukwethembeka kobungane beqiniso kuzobonakala kukho. ULuka izonikeza ukusekelwa okungenamibandela kuManuel futhi kuzomkhumbuza ukuthi wayazi u-Álvaro wangempela. Ngaphezu kwalokho, ngalo mlingisi umbhali ukhombisa izimo ezihlasimulisayo ezilimaza isonto futhi ezingaphumi obala.
Uyisikhulu esithathe umhlalaphansi seSpanish Civil Guard, indoda yesiko lomndeni, enezindinganiso eziqinile. Lo mlingiswa izosiza kakhulu uManuel emibuzweni ngokufa kuka-Álvaro. Ngenxa yalolu lwazi uzoguquka, futhi uzoba umuntu obekezela kakhudlwana.
Imisho kaDolores Redondo.
UMaria Dolores Redondo Meira Wazalelwa eDonostia - eSan Sebastián, ngoMgqibelo ngoFebhuwari 1, 1969. Uyizibulo emshadweni waseGalician; uyise, itilosi; nonina, umama wekhaya. Wayenobuntwana obabukhala ngokukhala nobuhlungu, ngoba eneminyaka engu-5 washonelwa udadewabo omncane. Kulezo zikhathi zobunzima umbhali uvumile ukuthi ubephephela ekufundeni ukuze agweme le mpi.
Ubusha kanye nezifundo zobungcweti
Kusukela esemncane wayezithanda izincwadi; kuya ku Iminyaka eyi-14 wabhala izindaba zakhe zokuqala futhi kamuva wabamba iqhaza emincintiswaneni ehlukahlukene kulo mkhakha. Ngokufana nomsebenzi wakhe njengombhali, waqala izifundo zakhe zezoMthetho e-University of Deusto, umsebenzi anquma ukuwushintshela kolunye ubizo lwakhe: ukupheka; ngakho-ke wafunda futhi waphothula ekubuyiselweni kokudla.
Umsebenzi wokuba ngumpheki
Eminyakeni engama-24 kuphela ubudala, wayesevele esengumpheki ebhizinisini lakhe, indawo encane etholakala eSan Sebastián. Ngemuva kweminyaka emibili yokusebenza kanzima nokufunda okuningi, uthathe isinqumo sokuyivala ngenxa yokuswela imali, ngoba izinto azihambanga ngendlela obekulindelwe ngayo. Kamuva, waqhubeka nomsebenzi wakhe wokupheka kwezinye izindawo zokudlela, esevele ekhululekile futhi engenazo izibopho eziningi noma ukukhathazeka.
Ngo-2009, umbhali waseSan Sebastian washicilela inoveli yakhe yokuqala Amalungelo engelosi. Eminyakeni emine kamuva, umsebenzi wakhe uthathe ithuba le-180 degree, lapho ethula lo mdlalo Umgcini ongabonakali (2013), aqala ngayo i- I-Baztán trilogy. Le saga ngokushesha yaba yinto yokubhala, nokuningi Amakhophi angama-700.000 athengisiwe futhi lihunyushelwa ezilimini ezingaphezu kwezingama-30 emhlabeni jikelele.
Ngemuva kwale mpumelelo emangalisayo, i-literata umphakathi Konke lokhu kuzokwenza Ngizonika (2016), inoveli athola i- Umklomelo wePlanethi yalowonyaka ofanayo. Ngo-2019, yethulwa Ubuso basenyakatho benhliziyo, prequel kufayela le- I-Baztán trilogy lapho kwembulwa khona abafundi ukuqala kokusebenza komsebenzi we-protagonist walesi saga, u-Amaia Salazar.
Amanoveli kaDolores Redondo
Amalungelo engelosi (2009)
Umgcini ongabonakali (2013)
Ifa Emathanjeni (2013)
Ukunikela kuSiphepho (2014)
Konke lokhu ngizokunika (2016)
I-North Face yenhliziyo (2019)
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Inoveli emnyama » Konke lokhu ngizokunika khona
Umndeni WeBhele Lomgede